Pear "Yakovlev Ya Na-ahọrọ": nkọwa nke njirimara dịgasị iche iche, usoro ihe ọkụkụ na foto - Ugbo - 2020
Ụtọ na ezi ube maka n'etiti mpaghara nke Russia Federation - na ọtụtụ "Lyubimitsa Yakovleva"
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, njedebe nke pears na Russia na-eto n'ike n'ike. Achọsi ike karịsịa maka ya dị n'etiti etiti - mpaghara nke na-enweghị ike ịnya isi otu ụdị vitamin dị iche iche dị ka mpaghara ndịda.
Otu n'ime omenala ndị a bụ ube ọtụtụ "Favorite Yakovlev" - Nkọwa nke ọdịdị dịgasị iche iche na foto nke mkpụrụ osisi dị n'okpuru ebe a.
Ndị na-akọ ubi na-adọta mmasị nke mara mma (karịsịa mgbe okooko osisi) nwere ike inye ezi mkpụrụ na osisi na-amị mkpụrụ na mkpụrụ osisi dị ụtọ.
Ube "Amara Yakovlev": nkọwa nke iche na foto
"Yakovlev nwere mmasị" na-ezo aka n'ụdị dị iche iche ripen n'oge mgbụsị akwụkwọ. Site na njedebe ya, mkpụrụ ya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na etiti Septemba.
Ụdị ube mgbụsị akwụkwọ gụnyere: Fairy, Uralochka, Silent Don, Tyoma na Larinskaya.
Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ n'oge mgbụsị akwụkwọ ube, ụdị a na-enye mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ, nke, n'ihi oke njigide ha na mma idebe ya, nwere ike (n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ) echekwara ruo ogologo oge.
A maara na "Amara" nwere ike ịchekwa ya n'enweghị nsogbu ọ bụla maka àgwà ya na uto ya ruo na November frosts.
N'ihi oke nkwekọ ya, pears ndị a nwere ike ibu njem njem dị anya site na-enweghị ihe mgbochi, nke dị oke mkpa maka mmezu nke owuwe ihe ubi na nkedo izu ahia.
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke ube a bụ ya dịtụ obere ọmụmụ onwe onye. Ogo ya dị ka ọtụtụ ndị ọkachamara na-agụ "Lyubimitsu Yakovlev" dị ka na-emekarị omenala onwe onye.
Dika "otutu onwe-fertility scale" di, ube a bu uzo n'agbata mkpuru nke onwe ya na nkpuru ndi nwere onwe ya.
Nke a pụtara na ihe dịgasị iche iche akọwapụtara site na pollination site na ya pollen na-enye ovary ihe dika 10-25% nke mkpokọta mkpụrụ osisi. Otú ọ dị, ọnụọgụgụ ahụ nwere ike ịdịgasị n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, dabere na ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ nke gburugburu ebe obibi.
Iji mee ka a hụ na nwoke na nwanyị na-emekọ nri na mmepe nke ezigbo owuwe ihe ubi, a na-atụ aro ka ị kụọ osisi pollinator n'akụkụ "Yakovlev Yụrụmma". A na-ewere pollinator kasị mma maka ụdị dịgasị iche iche dị ka "Summer Duchess" ("Williams").
Ọtụtụ afọ gara aga, onye ọkà mmụta sayensị Russia nke dị na MVurin malitere usoro nke ije ije dị n'ebe ugwu nke omenala thermophilic dị ka ube.
Ụmụ akwụkwọ ya na ndị na-eso ụzọ ya kere ọtụtụ ụdị ube nke malitere ịmị mkpụrụ ọma n'ọnọdụ ọjọọ nke Central Russia.
Otu n'ime ụmụazụ Michurin a bụ Pavel Nikanorovich Yakovlev (1898-1957).
Otu onye na-azụ anụ pụrụ iche, dọkịta nke sayensị na-arụ ọrụ ugbo, prọfesọ, ọkà mmụta sayensị nke Ụlọ Akwụkwọ Academy of Agricultural Sciences, mere ọtụtụ ihe iji mee ka osisi ndị na-eto eto dị n'etiti na ebe ugwu nke Soviet Union. Di iche iche "Lyubimitsa Yakovleva" ghọrọ "ihe ncheta" nke ihe omumu sayensi ya.
Ntị! Mmalite ndị na-elekọta ubi na-agbaghasị iche iche "Pet Yakovlev" na iche iche ma kwere na ọ bụ dwarf ma ọ bụ columnar ube - nke a bụ mmeghe, osisi siri ike ma na-eto ngwa ngwa.
Ọrụ maka ihe okike nke ụdị ọhụrụ Academician Yakovlev nọ n'obodo Michurinsk (Tambov mpaghara) na-adabere na Laboratory Genetic Genetic. I.V. Michurin (ugbu a bụ Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa nke Genetics na Nzube nke Osisi Mkpụrụ).
Iji weputa ube ohuru ndi nwere ihe ndi ozo kwesiri ebe ndi Russia na otutu ndi mmadu na-acho uzo, ndi oka sayensi na-eme njem di iche iche nke Michurin "Nwaanyị Blancova" ya na ube "Bergamot Esperen".
N'ihi ya, "Yakovlev a na-ahọrọ" gụnyere na State Register nke mmezu ozuzu nke Russia Federation maka mkpekọrịta na Central (Moscow, Ryazan, Tula, Kaluga mpaghara), Central Black Earth (Tambov, Lipetsk, Belgorod mpaghara) na Middle Volga (Penza, Samara, Ulyanovsk mpaghara, Mordovia, Tatarstan) mpaghara ugbo.
Ụdị pears Hera, Katidral, Krasnobakaya, Elena na Vernaia nwere mmetụta nke ọma na Middle Band.
Di iche iche "Yakovlev a na-ahọrọ" dị iche na iche iche ube na-esote na nhazi usoro:
Osisi. E weere dịka ume. N'otu oge ahụ, ruo n'ókè kachasị ya, osisi na-eto ngwa ngwa n'ọnọdụ ọnọdụ dị mma. Ogbugbo a kpuchie ya na ezigbo ogbugbo grayish.
Okpueze, alaka. N'elu osisi ahụ ka ọ na-eto eto na-ewere ụdị pyramid dị elu. Alaka na-acha uhie uhie na-esi n'osisi ahụ pụọ ma ọ bụ n'akụkụ aka nri. A na-eme atụmatụ nke okpueze dị ka nkezi.
Ome. Na ole na ole na-ada, na a na-adịghị ike cranked Ome ama akara ọchịchịrị agba aja agba. N'etiti mkpụrụ osisi na-achịkwa ube na kolchatka.
Doo. Akwukwo di iche iche nwere udi nke oblong. Agba - akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Akụrụ dị n'etiti etiti - ntụziaka ndị a kapịrị ọnụ. A na-enwekarị ndị buds na alaka.
Akwụsị ụkwụ. Ejiri nkeji 7-10. Okooko osisi na-acha ọcha agba. Ọ na-adọrọ adọrọ mma n'ihi ọdịdị dị iche iche nke azụ ya.
Mkpụrụ. Na mkpụrụ nke ụdị dịgasị iche iche, mkpụrụ osisi dị iche iche na-achịkwa karịa nkezi (nkezi nke oke ube ruru 130-140 g). Ụdị ahụ bụ oge oge ochie, ụdị ube, gbasaa. Akpụkpọ nwa nke nwa ebu n'afọ nwere ederede na-adịghị mma. Akpụkpọ anụ bụ nke na-ajụ ọkpụkpụ, dị mma na aka. Ụcha nke mkpụrụ osisi chara acha n'oge a na-ewepụ osisi ahụ bụ odo nke nwere tinge greenish, na mpaghara ụfọdụ nke akpụkpọ ahụ ọkụ nwere ike. Mgbe "ripening" mkpụrụ "Favorite" nweta gold hue. Na ube, e nwere ọtụtụ ebe a na-etinye ọgwụ hypodermic. Ọkpụkpụ na nnukwu mkpụrụ "stony" bụ ihe na-egosi ọkpụkpụ dị arọ, anụ ahụ na-acha ọbara ọbara. A na-enwe mkpuru osisi na ogologo oge, nke dị mkpụmkpụ.
Maka ama ọzọ gbasara ụdị dịgasị iche iche ma hụ pears "Yakovlev a na-ahọrọ" nwere ike ịbụ na foto dị n'okpuru:
Osisi nke di iche iche amalite ighita nkpuru 3-4 afọ mgbe ọdịda sapling Site na oge kachasị mkpụrụ na-enweta, osisi toro eto mgbe ọ dị afọ 7, na-enye nkezi nke 30-40 n'arọ ihe dị ụtọ.
Ya mere, na oge nke ịmị mkpụrụ zuru ezu, a ga-ewepụ ihe dị ka pasent 220-230 nke mkpụrụ osisi dị mma site na otu hectare nke ubi ahụ.
A na-atụle ekpokọtara ọkọlọtọ maka mkpụrụ osisi na-acha mkpụrụ sitere na osisi n'oge kachasị afọ ekwupụta na ọ na-atọ ụtọ, ọ na-atọ ụtọ, nke na-enweghị ụbụrụ, na ihe odide mbụ na-esi ísì ụtọ nke quince.
Egwu dị iche iche nke pears dị iche iche mara mma: Victoria, Forest Beauty, Moskvichka, Lel na Talgar mara mma.
N'okwu a, ihe mejupụtara mkpụrụ osisi "Pet Yakovlev" dị ka nke a:
Ihe na-arụsi ọrụ ike 32.7 mg / 100 g
Ascorbic acid 8.5 mg / 100 g
Ndị ọkachamara nyochaa ohere nke iji mkpụrụ osisi dị ka ụwa dum. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha dị oke mma ma n'ụdị ọhụrụ ma n'ụdị nhazi.
Site na ha, akpan akpan, ihe ndị dị mma na-emepụta, jams, nchebe, a na-enweta marmalades. Pears ndị a na-ewu ewu, n'etiti ihe ndị ọzọ, n'ihi na enwere ike ịchekwa ha n'ọnọdụ dị mma n'ime igwe refrjiraeto ruo ụbọchị 80.
Uru ndị dị iche iche nke ụdị dịgasị iche iche bụkwa ya enwe ezigbo oge oyi na oke oyi oyi.
Otú ọ dị, mgbe ịzụlite ụdị a abụghị ihe ize ndụ ahụ, ịnwale ịkụ ihe na ebe ndị na-ekwesịghị ekwesị.
Na-ekwu na ị na-eguzogide oyi ejiri n'aka naanị maka ógbè nke mkpekọrịta iwu ya.
Ụdị na-eguzogide ọgwụ na-agụnye pears: Extravaganza, Severyanka red-cheeked, Early Moscow, Orel Summer na Limonka.
Ịkụ osisi na-amalite site na nhọrọ ziri ezi nke ebe ọ ga-eto ma mịa mkpụrụ. Maka ọdịbendị a, ọ dị mkpa ka ebe ahụ dị ọkụ. Ọ bụrụ na ọnọdụ a adịghị ezute, mkpụrụ ga-efunahụ ọdịnaya shuga.
N'agbanyeghi n'eziokwu na ube na-ezo aka n'ozuzu na mkpuru ihe ubi na-acho nkpuru mmiri, o siri ike igbochi onu mmiri na ebe ozo. Ọ bụrụ na e nwere ihe iyi egwu dị otú ahụ, a ghaghị ime ndokwa maka ịhazi mmiri drainage.
Ọ ga-ahụ na ube "Favorite Yakovlev" hụrụ ala ndị bara ọgaranya na ala ojii, yana agba ọhịa ọhịa na loams. N'ọnọdụ ọ bụla, ịnwere ike ịkụ mkpụrụ na-eto eto naanị n'ala dị mma. Ya mere, ọ bụrụ na ala ahụ emezigharị, ọ dị mkpa iji ya na-eme ka mmiri ju ya.
N'okpuru akụ gwuru oghere nwere omimi nke 1 m na dayameta nke 65-70 cm. Ruo otu izu na ọkara tupu ị kụọ akụ na ya Wunye mmiri ịwụ mmiri na iko 2 nke mịrị amị na-agbaze.
Maka azụ azụ, jiri ala a wepụrụ mgbe ị na-egwu olulu ahụ. Tupu ejiji ya, agwakọta ya na ihe oriri humus (2 bọket), ájá (2 bọket) na superphosphate (1 cup).
N'oge a kụrụ ihe, a na-akụ mkpụrụ osisi ahụ n'ụzọ dị otú ahụ, n'elu ala, ihe dịka a na-agbanye mgbọrọgwụ nke mkpụrụ osisi ahụ maka 6-7 cm.
Mgbe ị wụnye mpaghara seedling gburugburu ya akpati nwayọọ compacted. Mgbe ahụ, ndị na-esonụ (2-3 bọket nke mmiri dị iche).
Iji kpochapụ nkụ na-adịghị mma na cracking nke ala, a na-ekpuchi gburugburu okirikiri 2-3 cm oyi akwa nke a mịrị amị humus mulch.
Iji nlezianya na-elekọta "Lyubimitsa Yakovleva" ube pụtara ịkụcha osisi mgbe nile, na-emeghe ma na-eme ka ala ahụ sie ike, na-eme ihe iji chebe osisi site na pests na ọrịa, belata ndị nwụrụ anwụ na alaka osisi na oge (na mmiri tupu oge ezumike).
N'agbanyeghị na oyi hardiness nke dịgasị iche iche, ọ ga-aba uru iji kpoo osisi ahụ ọkụ n'ehihie. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka osisi mgbe ọ dị obere.
Ọkwa "Yakovlev Ekele" abụghị ọrịa na-eguzogide ọrịa mkpụrụ a kụrụ (ọkara na-eguzogide).
Na-eguzogide isi ọrịa ndị dị iche iche pears: Sverdlovchanka, Chudesnitsa, Svetlyanka na Bere Bosk.
N'ime afọ mmiri na epiphytotic, nke a na-eji ngwa ngwa na mgbasawanye nke ọrịa na-efe efe na mpaghara buru ibu, o nwere ike na-emetụta ọnyá ahụ.
A na-egosipụta ụdị ọrịa a site na njirimara agba aja aja na agba ntụ-ojii nke na-eme na akwukwo na mkpụrụ osisi pear. Na-abụkarị onye na-ahụ maka ọrịa ahụ, na-egbu ya na ome, na-awakpo osisi n'oge oge okooko osisi ya.
N'ihi ya, epupụta na-akpọnwụ wee daa kpamkpam na ihe ọjọọ niile na-esi na osisi ahụ pụta, mkpụrụ ndị ahụ na-amị mkpụrụ wee ghọọ ntụpọ ma kwụsịrị ịṅụ oriri.
Ihe dị mkpa maka nchebe nke pears si scab bụ ihe mgbochi.
Ma ọ bụrụ na ọrịa ahụ emeworị, ala dị n'ubi ahụ na osisi kwesịrị ịdị na-abụ kwa oge agba ọla kọpa na ígwè vitriol, nitrafenom, olekupritami, mmiri mmiri Bordeaux.
Mmiri Bordeaux, nke a na-atụgharị mmiri 400 n'ime lita 10, na-atụgharị ya n'elu osisi ugboro atọ kwa oge - tupu mmalite nke okooko osisi, ozugbo ọ gbasara okooko na ụbọchị 17-20 mgbe njedebe nke oge okooko.
"Yakovlev a na-ahọrọ mmasị" - ụdị dị iche iche nke chọrọ nlebara anya, ihe ziri ezi nke ihe ọmụma na ọrụ, yana ima. N'okpuru ọnọdụ ndị a nile, ọ ga-azaghachi onye ahụ na nloghachi.